ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်မှုဆိုင်ရာအင်တာနက်ပစ္စည်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမသက်ဆိုင်သောအရာများနှင့်ထိတွေ့ခြင်း - သုံးပွင့်ဆိုင်လေ့လာမှုလေ့လာမှု (၂၀၀၈) - သင့် ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းမှုရှိသည်။
မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်အကဲဆတ်သောအင်တာနက်ကိုပစ္စည်းမှ Exposure နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံစိုကျလှနျး: တစ်ဦးကသုံး-Wave ကို Panel ကိုလေ့လာမှု (2008)
comments: porn ထိတွေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်အဆက်မပြတ်တိုးပွားစေပါသည်။ လေ့လာချက်:
" သာ. မကြာခဏမြီးကောင်ပေါက်, SEIM အသုံးပြုသောပိုမကြာခဏသူတို့လိင်စဉ်းစား, လိင်အတွက်အားကောင်းမိမိတို့၏အကျိုးစီးပွားဖြစ်လာခဲ့သည်, နှင့်ပိုပြီးမကြာခဏသူတို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ရဲ့အတှေးအများ၏အာရုံပြံ့လှငျ့ဖြစ်လာခဲ့သည်"
နီကိုးလ်ရဲ့ Resp ။ ဒီဇင်ဘာ Gary ၏ ANTI-SLAPP သို့ - တင်သွင်းရန်
Volume ကို 11, Issue 2, 2008
Doi: 10.1080 / 15213260801994238
Jochen ပတေရုသa & Patti အမ် Valkenburga
ဤလေ့လာမှု၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအင်တာနက်ပစ္စည်း (SEIM) သည်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရပိုမိုများပြားလာမှု (ဆိုလိုသည်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင်သိမြင်နားလည်မှုပါ ၀ င်မှု) တိုးမြှင့်ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။.
နောက်ထပ်ကျနော်တို့ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်အဆက်မပြတ်ပေါ် SEIM ထိတွေ့တဲ့အလားအလာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကမကထပြုခဲ့ခြင်းရှိမရှိနှင့် (ခ) ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြီးကောင်ပေါက်အကြားကွဲပြားရှိမရှိ (က) သိရန်လိုခဲ့သည်။ တစ်နှစ်၏သင်တန်းကျော်ကျနော်တို့စစ်တမ်းကောက်ယူ 962-13 နှစ်ပေါင်းသုံးကြိမ်အသက် 20 ဒတျချြမြီးကောင်ပေါက်။
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်းမော်ဒယ်ကြောင်းပြသ SEIM ထိတွေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံစိုကျလှနျးနှိုးဆွ။ ဤသည်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအပြည့်အဝ SEIM ထံမှပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထကကမကထပြုခဲ့ခဲ့သည်။ ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထအပေါ် SEIM မှထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြီးကောင်ပေါက်အကြားကွာခြားခဲ့ပါဘူး။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက်တစ်ခုအကြံပြု sexualized media environment သည်မြီးကောင်ပေါက်များ၏လိင်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်၊
မှ - ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအပေါ်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏သက်ရောက်မှု: အသုတေသနတစ်ဦးကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2012)
မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောသုတေသနများအရအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်လိင်ဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်အမျိုးမျိုးကိုရရှိထားသည့်ဆယ်ကျော်သက်များအကြားဆက်နွယ်မှုတစ်ခုရှိနေသည်။ Peter နှင့် Valkenburg (2008b) ကလိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြသောအကြောင်းအရာသည်ကြည့်ရှုသူများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများကိုဖော်ပြပေးနိုင်ပြီး၊ ဤယုံကြည်မှုများသည်သူတို့၏မိသားစုများနှင့်ကျောင်းများမှမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၌စွဲစွဲမြဲမြဲရှိခြင်းနှင့်ကွဲပြားနိုင်သည်ဟုငြင်းဆိုသည်။ ဤသည် dissonance, ဒါမှမဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်အတွက်ပconflictိပက္ခ, တိုးမြှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမသေချာမရေရာ (Peter & Valkenburg, 2008b) မှစွပ်စွဲထားသည်။
ပေတရုနှင့် Valkenburg (2008a) တစ်ဦး "အဖြစ်သတ်မှတ်, ဆယ်ကျော်သက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှထိတွေ့မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်အဆက်မပြတ်ကြားဆက်ဆံရေးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဤသုံးသပ်ချက်ကိုပထမဦးဆုံးခဲ့ကြ တစ်ခါတစ်ရံတွင်အခြားအတှေးအများ၏ဖယ်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စများအတွက်ခိုင်မာတဲ့သိမြင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု, " (စ။ 208) ။ ပေတရုနှင့် Valkenburg (2008a) 962 ယခုနှစ်သင်တန်းကျော် 1 ဒတျချြမြီးကောင်ပေါက်သုံးကြိမ်စစ်တမ်းကောက်ယူ။ သူတို့ရဲ့လေ့လာမှုက "ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပိုမကြာခဏမြီးကောင်ပေါက်, SEIM အသုံးပြုသောပိုမကြာခဏသူတို့လိင်အတွက်အားကောင်းမိမိတို့၏အကျိုးစီးပွားဖြစ်လာခဲ့သည်, လိင်စဉ်းစား, နှင့်ပိုပြီးမကြာခဏသူတို့ "ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ရဲ့အတှေးအများ၏အာရုံပြံ့လှငျ့ဖြစ်လာခဲ့သည် (Peter & Valkenburg, 2008a, p ။ 226) ။ ဒီလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုနောက်ထပ်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည် "SEIM မှထိတွေ့မှု၏ရလဒ်အဖြစ်လိင်စိတ်နိုးထမှတ်ဉာဏ်အတွက်လိင်-related သိမြင် Cue လိမ့်မည်။ ။ ။ ။ နောက်ဆုံးတွင်နာတာရှည်လက်လှမ်းလိင်-related သိမြင်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါ, ထို ", လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံစိုကျလှနျးဖြစ်ပါသည် (စ။ 227)